Zvikwereti zvisina chikwereti semari inodhura zvikuru mari
Crediting of the population is one of the most competitive spheres of work of Russian banking institutions. Kana zvasvika pakubhadhara chikwereti chekutenga motokari kana imwe motokari, pamwe chete nemagetsi, midziyo yemumba kana fesheni, ani naani anenge akwereta angave akavhiringidzika muzvikwereti zvinowanikwa uye zvikamu zvezvirongwa zvakarongwa. Vanhu vanowanzofarira zvikuru zvikwereti zvisina chikwereti. Chii ichocho? Uye pane zvipi zvingafanirwa kunyatsoteerera kuguma kwebvumirano?
Paunenge uchitenga kukuru muchitoro chekushandisa mudzimba kana motokari yekuratidzira, vashandi vesangano rebhangi vanogona kupa chikwereti kune mutengi pasina chido. Chii ichi, chinogona kutsanangura vashandi veimwe yemabhanki makuru muRussia. Uye chokwadi ndechokuti nekuda kwekukwikwidza kunoramba kuchikura mumusika wekwereti, masangano akawanda emari anofanira kuchinja sarudzo yekugamuchira mari yavo. Bonus interest-free loans haiti kumanikidza mutengi kubhadhara chero mimwe yemari yemari yekushandisa mari. Zvisinei, pavanenge vabhadharwa, vazhinji vevatengi vanokanganwa nezvezvinhu zvakakosha zvakadai sokubhadhara kwebasa rebhangi rinoshandiswa nekugadzirisa uye kupa chikwereti, pamwe nekuvhara nekuchengetedza kadhi kadhi. Kutarisira matengo emasangano anobatana, ruzhinji rwevateresi vanovimbisa kuti mari yakagadzikana.
Muenzaniso wezvikwereti zvisina chikwereti unowanzoswededzwa pachiyero che10-11% pagore, iyo inogona kuonekwa seyakanyatsogadziriswa muzvinhu chaizvo zvemazuva ano misika yemarikiti. Kunyora kunyoresa purogiramu yakadai pasina kushanyira davi rebhangi uye kuunganidza purogiramu yakaoma yevimbiso inoita kuti zvikwereti zvakadaro zvidikanwe kune vatengi vezvivigiro zvepamusha zvemidziyo nemotokari vatengesi. Mari yekubhadhara kwezvikwereti zvisina chikwereti inogona kusanganisira kubhadhara kwekuongororwa kwechikumbiro, kubhadharwa kwemashuwarisi, pamwe chete nemari yepamwedzi yekuchengetedza purogiramu. Vose pamwe chete, vanogona kuita mari yakaisvonaka, iyo ichazobhadhara kune muteresi asingafungi.
Chikwereti chisina chikwereti kune sangano repamutemo
Kazhinji, chikwereti chekwereti chinogona kupa rubatsiro rwakadaro kumutengi ane mari yakawanda uye anogona kuva nekusingaperi. Mhedzisiro yechikwereti ichocho chinoreva mamwe mazwi ekugadzirisa kwekugadzirisa pamwe chete, anotsanangurwa muzvikamu zvakakodzera zvekontrakiti. Zvechokwadi, inogona kuonekwa sevasungwa panguva iyo muchengeti anowana mari mune mari mubhangi yemari yemari kana kubvisa chinhu chakataurwa muchibvumirano. Inofanira kurangarirwa kuti mutemo wezvino weRussia Federation unoronga basa rezvikwereti zvikwereti uye nguva dzose inomiririra kuchengetedza kodzero dzevimbisi nevakwereta. Pasi pemitemo iripo, vashandi vebhangi vanofanirwa kupa mashoko akakwana, akakwana uye akazara pane chero dambudziko iro mutengi akambomutsa. Iwe usati wawana chikwereti chisingabhadhari, iwe unogara uchibvunza kuti zvipi zvingadiwa kuti ubhadharire, uye kunyatsoverenga: chii chichava chikwereti chakabhadhara pane chikwereti chakazivisa.
Rokuti Yuan (Yuan). Mari zvenyika - mazita
Pamutemo mari pamusoro Morocco. Munyika mari. mavambo ayo uye chitarisiko.
Rubles vari National mari vangani? Zvakarurama dzokorora mari
Bolivar - Venezuela Currency: nhoroondo uye zvinhu
Vashandi vechikwereti kune mumwe nomumwe - chokwadi chiduku kubva kumuongorori
The chete National UK mari: British Pound
Flu muna vana nevakuru. A mashoko mashomanana pamusoro avo ezuva nezuva
Kigelia - kwaziso kubva inopisa Africa
Kuchinja password "In Touch"? Mirayiridzo vanoshandisa
Akadhindwa redunhu bhodhi: tsananguro, izita
Lavender munda - kuzvikudza France uye National chiratidzo Provence. Lavender muminda Crimean
Konstantin Glukhov: wokuLatvia nyeredzi MMA uye Kickboxing
Hotel Kars, Divnomorskoe: kuongorora, kero, maitirwo
How vaswedere utsi nenzira dzakasiyana-siyana
A. Aleksin, "wechitatu wechishanu mumutsara": pfupiso. "Chechitatu ari wechishanu mumutsara": wongororo
"Elbrus" (the dzisina): mapikicha, ongororo, nzvimbo, hotels
Magic mazano vana kumba. Children zvakapesana kumba
Zita Ninja nenjiva? Ndiani uyo ouswa magamba